China Gelatin for Hard Capsules ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Ngokuthuthukiswa komkhakha wezemithi, izidingo eziyinkimbinkimbi neziqinile zemisebenzi eminingi zibekwa phambili ekusebenzeni kwezinto, okunzima ukuhlangabezana nazo ngezinto eziningi zensimbi nezinto zokwenza izinto.
I-Gelatin iyinto ebonakalayo yemvelo ye-polymer, enesakhiwo esifanayo kakhulu nesidalwa. Inezakhiwo ezinhle zomzimba nezamakhemikhali, ukuvumelana kwezinto eziphilayo, ukuguquguquka kwemvelo, kanye nokukhiqizwa okulula, ukucubungula nokubumba izici, okwenza kube inzuzo ngokuphelele emkhakheni we-biomedicine.
Nini i-gelatin yemithi isetshenziselwa ukukhiqiza okuyize i-capsule elukhunis, inezici eziyinhloko ezifana ne-viscosity efanele ekugxilweni okuphezulu, amandla aphezulu emishini, ukungaguquguquki okushisayo, iphoyinti eliphansi / elifanelekile lokuqina, amandla anele, ukubonakala okuphezulu nokukhanya kwe-gelatin okwakha udonga lwe-capsule.
Isizathu esenza i-gelatin yezokwelapha inomlando omude ukuthi i-gelatin capsule yokuqala yazalwa ngo-1833. Kusukela lapho, i-gelatin ibisetshenziswa kabanzi embonini yezemithi futhi iba yingxenye yayo ebaluleke kakhulu.
Isimo sokuhlolwa: China PharmacopoeiaUhlelo luka-2015 2 Okwe-Hard Capsule
1. Amandla Jelly (6.67%) 200-260bloom
2.Umsindo (6.67% 60 ℃) 40-50mps
Salmonella Okubi / 25g
Langaphambilini Isilwane sasekhaya uCollagen
Olandelayo: I-Gelatin yeSoftgel